I-EA014 - Ama-Alamu Wombhede Ophuma Ezingcingo Ophuma Ekhaya (Ukuvimbela Ukuwa Kwabantu Abadala) - S $ 380 - Izixazululo ze-OMG
I-EA014 - Ama-Alamu Wombhede Ophuma Ezingcingo Ophuma Ekhaya (Ukuvimbela Ukuwa Kwabadala) - S $ 380
Akukho umsindo endaweni! Faka i-Monitor Monitor Engenayo ye-wireless e-Quiet lapho uyidinga khona
"I-New Patented Technology" ye-wireless Fall Monitor ingasuswa kude nombhede wabahlali (i-alamu yebhedi engenamandla). Ukuqapha kungabuyekwa ngaphezu kombhede okunciphisa umsindo we-alamu eduze kwekhanda lesakhamuzi kanye ne-TamperProofs umqapha ukuze umhlali angahlali kabusha. Ukuqapha kungabuye kufakwe emgodini okwehlisa umsindo we-alamu ekamelweni. Kuphephile ngoba abahlinzeki baziswa ngokukhanya okukhanyayo okukhanyayo kanye ne-alamu esheshayo emgodini obazisa lapho ohlala khona ekhuphuka.
Lona ubuchwepheshe bethu obunamalungelo obunamalungelo obugebengu obunamalungelo obugebengu obunamalungelo obugebengu obunamalungelo obunikazi obuvumela ukuthi umnakekeli awazi ukuthi isignali ilahlekile noma isilondolozi esingenawo ucingo singekho ebangeni. Kungabuye kukhishwe ngaphandle kwegumbi lesiguli ngesisombululo esiqinile!
Azikho izintambo eziphakathi kwamapayipi nokuqapha okungenawaya okungenantambo
I-OMGTL-2100G engenawashi i-Wire Monitor ihlale ibonisa ukuthi isignali itholakele kusuka kwiphini lesisindo futhi uhlelo lusebenza kahle. Uma isibonakaliso se-sensor siphukile noma singekho ebangeni, qapha i-alamu bese ibonisa isignali ilahlekile.
Sebenzisa umshini wokuwazisa ongenazintambo ongaxhunyiwe ngaphandle kombhede we-sensor pad; isikhwama senzwa yesinevili; umshini wokucindezela ophansi; ukuwa kwezintambo noma inzwa yokuhamba.
Ukubuka okuphelele kwe-4343 Ukubuka kwe-1 Namuhla